Alaeze Chineke ọ̀ dị n’obi ndị mmadụ? | Ihe Baịbụl kwuru
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Georgian German Greek Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Korean Lithuanian Malagasy Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Xhosa Zulu
Alaeze Chineke ọ̀ dị n’obi ndị mmadụ?
“Ị nọghị alaeze Chineke ebe dị anya.”—Mak 12:34.
Ọtụtụ ndị na-ekwu na Alaeze Chineke dị n’obi ndị mmadụ. E nwedịrị otu chọọchị na-akụzi na ọ bụrụ na mmadụ na-efe Chineke, ọ pụtara na Alaeze Chineke dị n’obi onye ahụ.
Alaeze Chineke bụ ọchịchị si n’aka Chineke. O nwere eze, nweekwa ndị ọ na-achị. Ọ dịghị n’obi ndị na-efe Chineke. Baịbụl kwukwara na ọ ga-achị ụwa a.—Abụ Ọma 72:8; Daniel 7:14.
Na Luk isi iri na asaa amaokwu iri abụọ na otu, Jizọs sịrị, “alaeze Chineke dị n’ime unu.” (King James Version, nke Bekee) Gịnị ka ihe a o kwuru pụtara? E nweghị otú Jizọs ga-esi kwuo na Alaeze Chineke dị n’obi ndị ahụ ọ na-agwa okwu. Gịnị mere anyị ji kwuo otú a? Ọ bụ n’ihi na ndị ọ gwara ihe ahụ bụ ndị Farisii. Jizọs kwuru na ha agaghị eketa Alaeze Chineke n’ihi na ha bụ ndị ihu abụọ. (Matiu 23:13) Ọ bụ ya mere na ihe nsụgharị Baịbụl ndị ọzọ dere n’amaokwu ahụ bụ Alaeze Chineke “dị n’etiti unu.” Ebe ọ bụ Jizọs ga-abụ eze nke Alaeze Chineke, o nwere ike ikwu otú ahụ n’ihi na o guzo n’ihu ha.—Luk 17:21.
“Ka alaeze gị bịa. Ka uche gị meekwa n’ụwa, dị ka ọ na-eme n’eluigwe.” —Matiu 6:10.
Alaeze Chineke bụ ọchịchị si n’aka Chineke. Ọ bụ Jizọs Kraịst bụ eze ya. (Matiu 28:18; 1 Timoti 6:14, 15) Alaeze a ga-eme ka e mee uche Chineke ma n’eluigwe ma n’ụwa. (Matiu 6:10) Mgbe Alaeze Chineke bịara, ihe niile na-akpatara ụmụ mmadụ nsogbu agaghịzi adị. Alaeze Chineke ga-eme ihe niile ọchịchị ụmụ mmadụ na-enweghị ike ime.
Mgbe Alaeze Chineke ga-abịa, ụwa ga-aghọ paradaịs, udo ga-adị n’ụwa, obi ga-erukwa mmadụ niile ala. (Abụ Ọma 46:9; Aịzaya 35:1; Maịka 4:4) Ọrịa agaghị adị, ọnwụ agaghị adịkwa. (Aịzaya 33:24; Mkpughe 21:4) Ndị mmadụ agaghịkwa na-aka nká. Baịbụl kwuru, sị: “Ka ahụ́ ya dị ọhụrụ karịa otú ọ dị n’oge ọ bụ nwata; ka ọ laghachi otú ọ dị n’oge o nwere ike okorobịa.”—Job 33:25.
I nwere ike iketa Alaeze Chineke ma i mee ihe Chineke chọrọ n’agbanyeghị onye ị bụ. Baịbụl sịrị: “Chineke adịghị ele mmadụ anya n’ihu, kama ná mba ọ bụla, onye na-atụ egwu ya ma na-eme ezi omume bụ onye ọ na-anabata nke ọma.”—Ọrụ Ndịozi 10:34, 35.
Ụmụ mmadụ hà nwere ike iweta Alaeze Chineke?
“Chineke nke eluigwe ga-eme ka otu alaeze nke a na-agaghị ebibi ebibi malite ịchị.”—Daniel 2:44.
Ụfọdụ na-ekwu na ọ bụ ụmụ mmadụ ga-eweta Alaeze Chineke. Ha na-ekwu na otú a ga-esi mee ya bụ ime ka ndị ọzọ ghọọ ndị chọọchị ha ma ọ bụkwanụ ime ka mba niile dịrị n’otu.
Ọ bụ Chineke ga-eweta Alaeze ahụ, ọ bụghị mmadụ. (Daniel 2:44) Baịbụl kwuru na mgbe Alaeze ahụ malitere ịchị, Chineke kwuru, sị: “Mụ onwe m emewo ka eze m nọdụ n’ocheeze.” (Abụ Ọma 2:6) Ụmụ mmadụ agaghị ewetali Alaeze Chineke, ha agaghịkwa emebili ya n’ihi na ọ ga-esi n’eluigwe na-achị ụwa.—Matiu 4:17.
GỊNỊ MERE IHE A JI GBASA GỊ?
Onye ọ bụla n’ime anyị chọrọ ka udo dị n’ụwa, mmadụ niile adịrịkwa n’otu. O nwedịrị ndị na-agba mbọ ịhụ na e nwere udo na ịdị n’otu n’ụwa. Ma, ike na-abịa gwụ ha mgbe mbọ ha na-agba kụrụ afọ n’ala. Kama mmadụ ịnọ na-agba ụdị mbọ a, ihe anyị kwesịrị ịna-eme bụ ịkwado Alaeze Chineke, n’ihi na ọ bụ naanị Chineke ga-emeli ka e nwee udo na ịdị n’otu n’ụwa.